Waancaa Addunyaa 2018: Waancaan Addunyaa maaliif Mesiitti garaa jabaate? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Mesiin waancaa adunyaa Raashiyaarra yeroodhaan gaggefamaa laata?
Kirooshiyaadhaan istaadiyeemii Niizhinii Noovgoorood irratti Arjentinaan osoo hin eegamiin 3 fi 0'n erga mo'amtee suuraan Liyonel Mesii aariin guutamee gara kutaa uffannaatti deemaa ture agarsiisu Aasxaa gurguddoo Waancaa Addunyaa bara 2018 Raashiyaatti mul'atan keessaa isa guddaadha.
Taphataa cimaan adunyaa keenyaa yeroo shanii mesiin,taphoota lama irratti galchii tokkollee osoo hin lakkofsisiin, kubba galchii tahuu dandeessus mijeessee osoo hin kenniin hafe.Dabalataan rukuttaa adabbii tapha Ayislaandi irratti argamtes lakkoofsisuu hin dandeenye ture.
Biyyi Ameerikaa kibbaa kun erga bara 2002 as yeroo jalqabaaf gareeshee keessaa osoo hin darbiin hafuu dandeessi,keessumaa erga bara Mesiin as yeroo jalqabaaf tahuusaati.
Dhuguma deeggartootni Meeksikoo lafa sochoosanii?
Waancaan Addunyaa baranaa kun Mesiif isa xumuraa tahuu danda'a. Garee biyyaalessaa waliin badhaasa guddaa medaliyaa warqii kan argate dorgommii bara Olompikii Beejiingi bara 2008 ture.
Mesiin Baarseloonaa waliin waancaawwan hedduu injifatus erga waggota sadiin as garuu waancaa shaampiyoonsiliigii irratti ol'aantummaan masaanuusaanii riyaal maadrid argamaa dhufeera.
kanaafuu kufaatii mesii dhiyeenya kanaaf sababni maali?
Goodayyaa suuraa Dadhabbii fi miidhamni gahumsasaa gdi buusuu hin hafu
Bara dorgommii 2017/18 darbetti erga bara 2014/15 as taphoota 54 irratti hirmaachuunsaa isa olaanaa dha.
Daqiiqaawwan 4468 gidduu galeessaan daqiiqota 87.5 dirreeera turuun dabarse.
Bara darbe galchiiwwan 45 fi kubba galchii tahan mijeessee kennuun ammoo 18'n xumure.
2) miidhama sasalphaa
Gaazexaan biyya Arjentinaa tokko kanaan dura akka gabaasetti Mesiin miidhama koronyoo miila mirgasarra jiruun rakkachaa jira, kanaafuu akka barbaadetti saffisuuf isa rakkisaa jira jechuun gabaasee ture.
Tapha michummaa Xaaliyaanii fi Ispeen irraa yommuu hafu dhimmichi uummataaf ifa tahe.
Booda garensaa tapha Ispeeniin 6 fi 1'n yommuu mo'amtu taa'ee ilaaluuf dirqamee ture.
3) Gareen Arjentinaa ammaa gahumsa gaarii dhabuu mala
Tapha gulaallii irrattis baayee erga rakkatnii gara boodaatti ida'ama qabxii walii galaan akka darban ni beekama.
Haa tahu malee mesiin taphataa galchii olaanaan lakkofsiseef ture.
Arjentiinaan waancaa guddaa kan injifate bara Deegoo Maraadoonaa fa'a 1986 ture.Erga sanaa as waancaa biyyoota Ameerikaa Kibbaa [copa america]bara 1993 mo'atan. Dabalataan bara 2004 fi 2008 dhaqaa galaan waancaa Olompikii mo'atanis haamileesaanii deebisuu hin dandeenye.
Goodayyaa suuraa Mesii fi Roonaldoon Waancaa Adunyaa irratti ammaaf hagas mara garaagarummaa hin qaban.
4) Yaadasaatti morkataasaa Ronaaldoo
Ronaaldoon dorgommii bara kanaa dursaa gareesaa tahuun jalqabee galchiiwwan sadiis tapha jalqabaa irratti lakkofsise. Amma galchiiwwan afur taphoota lama irratti lakkofsiseera. Mesiin garuu kana gochuu hin dandeenye.
Dabalataan bara 2016 gareesaa Roonaldoon waancaa awurooppaa akka injifatu taasiseera. mesiin garuu walitti aansuun xumura Waancaa Addunyaa fi Koppaa Amerikaa'f yeroo sadiif dhaqqabus mo'achuu hin dandeenye.
Kanaaf garee biyyaalessarraa soorama bahuusaa ibsuun booda kan yaadasaa jijjiire. Umuriin Mesii amma waggaa 30 tahus akka Roonaaldoo ammaatti Waancaa Addunyaa Qaatar irratti hirmaachuu danda'a, garuu asumaan soorama bahuusaa ibsuu danda'a kan jedhanis jiru.
Mesiin biyyasaa waliin wal tajjjii addunyarratti waancaa milkessuu hin dandeenye.